MRB wireless Dadka waxay ka hortagaan HPC005
Kaarka IR Beam
Kaaliyaha Rakaabka / MDVR
Shukaansi Tirinta Shaqada
Dadka MRB oo tirinaya kamarad HPC008
Nidaamka tirinta Gawaarida MRB AI HPC199
Nidaamka Tirinta Rakaabka MRB otomaatiga ah ee baska HPC088
MRB wifi cag-dhigeyaasha HPC015S
Qalabka MRB ESL
Tani waa a dadka wireless-ka counter in lagu kala qaadi karo iyada oo aan WIFI, Qaar badan oo naga mid ah dadka tiriya waa alaab shati leh. Si looga fogaado xatooyada, ma aanan saarin waxyaabo aad u badan bogga. Waxaad la xiriiri kartaa shaqaalaheena iibka si ay kuugu soo diraan macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan miiska dadkeenna.
Xilliga xogta weyn, Dadku way diidaanwaxay kadhigeysaa xogta mid saxan oo fududeynaysa ganacsiga. Infrared dadka counter waxay ku habboon tahay maktabadaha, xarumaha tareenka xawaaraha sare leh, dukaamada taleefannada gacanta, suuqyada hibada, hoolalka ganacsiga ee isgaarsiinta, xafiisyada dowladda, dukaamada waaweyn, silsiladaha dharka, Madaarada waaweyn, matxafyada sayniska iyo tikniyoolajiyadda iyo meelo kale, oo aan ka duwanayn dhidibka dadka counter, ah dadka counteree MRB waa kalabar oo keliya cabirka kaarka deynta. Aad ayey ugu habboon tahay rakibidda, tirinta laba-geesoodka ah, oo si caqligal ah u kala soocaya jihada shaqaalaha soo galaya iyo kuwa ka baxaya, rakibiduna uma baahna fiilooyin. Albaabka ogaanshaha ugu badan waa 40 mitir oo balac ah, gudbinta xogta wireless, iyo masaafada gudbinta wireless-ka ayaa aad uga dheer tan router-ka wireless-ka ah.Dadku way diidaan waxay u isticmaashaa baytariyada lithium-ion quwad koronto, oo socon kara ilaa 2 sano, taas oo iyaduna ka duwan tan dhidibka dadka counter.
Faa'iidooyinka alaabada ee MRB infrared counter counter
1. Naqshadaynta dadka counterwaa mid fudud oo deeqsi ah. Naqshadda muuqaalka ee miiska cusubi waa mid kooban, rakibidda rakibidda, koollada taageerada.
2. Nolosha batteriga oo dheer, dadka counter nolosha batteriga waxay gaari kartaa hal sano iyo bar, 3.6V batari awood weyn leh oo lithium ah, danab 1.5-3.6V, iyadoo la adeegsanayo AA (Lambarka 5), ​​laqabsasho fiican.
3. Kordhi bandhiga LCD ee dadka infrared counter, xogta gudaha iyo dibedda ayaa ku cad jaleecada, waadna arki kartaa si cad.
4. Gudbinta xogta ee dadka counterwaa deggan yahay. Xogta laga soo gudbiyo miiska socodka rakaabka ee loo gudbiyo aqbalaha xogta ayaa ah dhammaan xogta la duubay, oo aan faragelinayn aaladaha kale oo ka ammaan badan.
5. Kahortag faragelinta iftiinka dadka counter si wax ku ool ah, oo u xalliya qaladka tirinta ee sababay isbeddelka iftiinka deegaanka.
6. Real-waqtiga wax soo saarka xogta iyada oo loo marayo shaashadda xayeysiinta LED on our dadka infrared counter, iyo xogta tirakoobka waxaa lagu saadaalin karaa shaashadda xayeysiinta LED iyada oo loo marayo borotokoolka iyadoo la adeegsanayo softiweerka kormeerka waqtiga-dhabta ah.
7. MRB Dadku way diidaan Dhex geli karaa galaaska si caadi ah u shaqeynaya faragelin la'aan ka imaaneyso albaabada iyo daaqadaha muraayadaha
8. Mar haddii falaadhaha infrared ee soo galaya ay Dadku way diidaan waxaa xira dadka ama walxaha in ka badan 5 ilbidhiqsi, muujinta ayaa muujineysa qaabka la xiray, iftiinka LED-ka ee bartamaha RX ayaa iftiimi doona si uu u muujiyo in carqalad jirto, xogtana waxaa lagu wargalin doonaa qofka qaata xogta. Waxa kale oo jiri doona diiwaanno laxiriira iyo talooyin kujira barnaamijka softiweerkadadka counter.
9.Ku qanci shuruudaha kala duwan ee loo habeeyay, LOGO macaamiisha ayaa lagu dari karaa dadka counter sanduuqa hadiyadda ama hadiyadda.
10.MRB dadka counter masaafo ballaaran: ilaa 1-40 mitir rakibidda masaafada dheer.
11. Tan dadka counter waxaa loo isticmaali karaa xakamaynta Shaqada ilaa software
Guud Dadku way diidaan
Koronto 1.5v / 3.6v AA ama baytariyada lithium ee dareemayaasha; Adapter / USB ku shaqeeya DC
Cabbir 2.5 x 2.3 x 0.98 "
Heerkulka Hawlgalka -10 ~ 40 ℃
Midab Cadaan, ama Customized
Rakibaadda Dhammaan noocyada dukaamada, maktabadda, Matxafka, Isbitaalka, Dugsiga
Hawlgalka Hawsha Qaadashada (RX) 180μA
Xaalada Gobolka ee Xilliga Qaadashada (RX) 70μA
Operating Current ee Soo-gudbiyaha (TX) 200μA
Xaaladda Ma guurto ah ee Hada Lagu Hayo Soo Gaadhiyaha (TX) 80μA
Jidka Ogaanshaha Rays infrared
Tirinta Wadada Toogasho Toos ah iyo Hooska ka dibna Tiri
Muddada Gudbinta Xogta 5 Daqiiqo laga bilaabo RX illaa DC - waa la habeeyay; Isla markiiba - DC si ay u software
Joogtada Gudbinta RF 433MHz, La xareeyay
Wadada Xiriirka RX illaa DC by RF Transmission, DC kombiyuutarka adoo adeegsanaya fiilada USB;
Barnaamijka istaandarka ah Bakhaarka calaamadaha, ee ka sarreeya daaqadaha 2003
Barnaamijka shabakadda Dukaamada silsiladda, daaqadaha kor ku xusan 2003 iyo SQL2005 ayaa u adeega.
Dhererka 1.2 mitir, waji ka waji
Ballaaran ≤20 mitir
Jidka Go'an Boolal ama Istaamo
Range ka Dareemayaasha illaa DC ≤40 mitir
Waxaan leenahay noocyo badan oo IR ah dadka counter, 2D, 3D, AI dadka counter, had iyo jeer waxaa jira mid adiga kugu habboon, fadlan nala soo xiriir, waxaan kugula talin doonnaa midka ugu habboon dadka counter adiga 24 saac gudahood.
HPC005 wireless Dadka dadku waxay ka soo horjeedaan fiidiyaha
Hore: Dadka dijitaalka ah ee MRB waxay ka hortagaan HPC005U
Xiga: MRB Shaqada counter taxane HPC
Xakamaynta Belarka infrared
Xisaabinta Dadka infrared
Tirakoobka Gaadiidka infrared
MRB tafaariiqda taraafikada tafaariiqda ee loogu talagalay dadka tafaariiqda ...
MRB dadka otomaatiga ah waxay ka hortagaan HPC005S
MRB USB mashiinka tirinta bini'aadamka ee tafaariiqda HPC015U
Dadka dijitaalka ah ee MRB waxay ka hortagaan HPC005U
Wax soosaarkayaga waxaa loo dhoofiyaa in kabadan 100 wadan iyo gobolada dal iyo dibadba. Taageerada xoogan ee macaamiisheena, MRB waxay sameysay horumar weyn.
Cinwaanka: Qolka 818-820, dhismaha B, St. NOAH, Maya 1759, Jinshajiang Road, Degmada Putuo, Shanghai, Shiinaha.
Fakis: + 86-21-52353906